‘जागिर छाडेर पुस्तक पसल खोलेँ’ « Loktantrapost
‘जागिर छाडेर पुस्तक पसल खोलेँ’
२ माघ २०७२, शनिबार १०:२१
फेसबुकमा सधैँ सामाजिक खबरदारीका विचार प्रवाह गरिरहने काँकरभिट्टाका खिलबहादुर घिमिरे पेशाले स्टेशनरी व्यवसायी हुन् । मेचीनगर–१३ सालघारी निवासी उनले २०५६ सालदेखि पुस्तक व्यवसाय थाले । तीखा र सत्य टिप्पणी गर्न पोख्त उनको रुचि भने अध्ययनमा छ । अङ्कित पुस्तक पसलका सञ्चालक घिमिरेसँग लोकतन्त्र पोष्टका देवु बानियाँले गरेको पुस्तक वार्ता प्रस्तुत छः–
शरदचन्द्र वस्तीको ‘हाम्रो भाषा’ भर्खर पढि सिध्याएर रमेशनाथ पाण्डेको ‘कुटनीति र राजनीति’ पढ्दैछु ।
प्रगतिशील धारका पुस्तक पढ्छु । त्यसमा उपन्यास वा चर्चित व्यक्तिका आत्मकथा र जीवनी पनि हुन सक्छन् ।
अङ्ग्रेजी भाषामा कमजोर भएकोले नेपाली लेखक नै मन पर्छन् । धेरै छन् । एउटाको मात्र नाम लिँदा अरूको अपमान हुन्छ जस्तो लाग्छ । तैपनि पारिजात, धच गोतामे, आहुती पहिलो सूचीमा पर्छन् ।
नारायण ढकालको दुर्भिक्ष, पारिजातको अनिँदो पहाडसँगै र धच गोतामेको ‘घामका पाइलाहरू’ पढ्न सुझाव दिन्छु ।
पुस्तक पसलमा सानैदेखिको रूची हो । २०५३ देखि २०५६ सालसम्म एउटा संस्थामा जागिर खाने शिलशिलामा करिब ३ वर्ष घरदेखि बाहिर रहेँ । त्यस अवधिमा विहान कार्यालय समय अघि र बेलुका कार्यालय समय पछाडि फुर्सद नै हुने हँुदा यो समयलाई पुस्तक पढ्नका लागि सदुपयोग गर्थैँ । त्यसमा पनि एक जना पुस्तक पसले मित्र हुनुहुन्थ्यो । उहाँ भएकोमा गएर बस्ने पुस्तक तथा पत्रपत्रिका पढेर त्यो समयलाई उपयोग गरिन्थ्यो । उनीसँगको सङ्गतले र पुस्तक पनि पढ्न पाइने र व्यवसाय पनि हुने लोभले गर्दा जागिर छोडेपछि पुस्तक पसल नै गर्ने प्रेरणा मिलेको हो । २०५६ सालदेखि यो पसल चलाउँदै आएको छु ।
दैनिक पत्रिका समेतको व्यवसाय भएको हुँदा बिहान ५ बजे नै घरबाट निस्कन्छु र बेलुका पनि ८ बजेतिर मात्र घर पुगिने भएकोले पसलमा ग्राहक नभएको मौका पारेर दिउँसो पसलमै पढ्छु । अनि, कहिले काहिँ राती ९ बजे पछिको समयमा पढ्छु ।
पुस्तक कसरी जतन गर्नुहुन्छ ?
साँच्चै भन्नु पर्दा पुस्तक व्यवसायी भएको हुँदा आफूले पढ्ने पुस्तक छुट्टै किन्नु परेको छैन । त्यसैले घरमा लगेर राख्ने कुरा पनि भएन । विव्रmी गर्ने पुस्तक नै पढिने भएकोले जतन त गर्नु परिहाल्यो नि ।
साहित्य लेखनमा कुनै रूची ?
कहिले काँही अखबारी लेखनमा आएको लेखमाथि प्रतिव्रिmया लेख्नु बाहेक अरू लेख रचना गर्न हिम्मत गरेको छैन ।